Kordhi Beddelka Mushaharka ee Riix Hal Guji
Macaamiilku wuxuu daabacaa xayeysiis lacag leh oo lagu dhiirrigeliyo a xigasho deg deg ah xayeysiiska… wicitaanka waxaa lageeyaa xarunta wicitaanka halkaas oo sicirka aan laga bixin. Oob. Macmiil kale ayaa si meeris ah u wareegaya ereyada muhiimka ah maaddaama aysan helin beddelaad. Oops… foomka iibku wuxuu u gudbinayaa bog aan la helin. Hase yeeshe macmiil kale ayaa ku daraya CAPTCHA foomka jiilka hoggaaminta… oo aan run ahaantii shaqeynin. Oob.
Kuwani dhammaantood waa tusaalooyin ay shirkadaha uga baxayaan kumanaan doolar miisaaniyadaha raadinta ee la bixiyay. Kaliya kuma aysan keenin dakhli toos u lumay, waxay sidoo kale niyad jabiyeen rajooyin aan waligood soo laaban doonin.
Marka iibka websaydhka ama hoggaanku aanu hirgalin, shirkaduhu badanaa way tilmaami doonaan suuq-geynta internetka dadaallada sida sharwadayaal ah Ololahaaga internetka ayaa garaaci kara bartilmaameedyadooda… laakiin wali wuu ku guuldareysanayaa sababtoo ah fulin liidata xagga dambe.
Halkan waxaa ah 10 Tallaabo oo lagu guuleysto beddelaadyo leh Raadin Lacageed
Hubso inaad haysato Analytics xalka meesha (oo isticmaal).
Awoodi raadinta goolka (sidoo kale loo yaqaan raadinta ecommerce). Haddii aad kaliya raadineyso yoolalka, u qoondee qiime yool kasta oo la raadraaco.
Guddi yoolalka beddelashada goolka mid walba cabirkiisa. La soco waxqabadka isha, ololaha, xayeysiiska, erayga muhiimka ah, iyo cabbir kale.
Gudaha AdWords, Xarunta Xayeysiinta, ama Xisaabaadyo kale, hubi in raadinta beddelaad daaran yahay oo u shaqeynayo si sax ah.
Joogto ah falanqee waxqabadka cabirrada, maahan oo keliya koontooyinkaaga
Cabir KPI dheeraad ah, oo ay ku jiraan heerarka soo kabashada, celceliska bogagga booqashada, iyo celceliska waqtiga goobta walxaha olole kasta. Waxyaabaha liita ee ku yaal boggaaga ama bogga soo degitaanka ayaa saameyn xun ku yeelan kara ololayaasha.
Fiiri ah habka lacag bixinta shaqsi ahaan ama qof kale u dhaqmo sida a Dukaan qarsoon si loo soo bandhigo dhibaatooyinka.
Tijaabi awoodaada inaad dhameystir ficilada aad rabto (waxaad si guul leh u dhammaystiri kartaa amarka khadka tooska ah ama aad codsan kartaa buug-yare / buug-yare, iwm.). Tani macno ma samaynayso oo keliya an ma shaqeyneysaa istaagid, laakiin waxay kaa caawineysaa inaad aqoonsatid khibradaha adeegsadaha / arrimaha isticmaalka ee la sixi karo ama lagu hagaajin karo.
Haddii heerkaaga kuugu dhow uu ku tiirsan yahay dhaqaajinta rajooyinka iyada oo loo marayo a kobcinta barnaamijka, tusaale ahaan emayl ama taleefan, sidoo kale falanqee tan. Mar labaad, maahan inta hoggaamiye ee aad abuureyso laakiin waxa aad ku sameyso iyaga.
Waxaad ka soo saari kartaa gunaanad khaldan oo ku saabsan sida liidata ee aad u maleyneyso in ololayaashaadu ay wax u socdaan haddii aad qiimeyneyso xogtooda kaliya, sameyso tijaabinta bartaada shaqo joogto ah.
Qiimaha guusha waa feejignaan weligeed ah. Hubso inay wax shaqeeyaan! Websaydhkaagu waa qayb ka mid ah ganacsigaaga, oo aan ka gooni ahayn. Haddii jiilka led waa muhiim, ha u istaagin raadinta mugga raadadkaaga, laakiin kormeer natiijooyinka. Xaaladaha qaarkood, halka horumarku uu yahay mid suurad wacan / lagama maarmaan ah, fulintaada internetka ayaa laga yaabaa inay tahay arrinta. Ha sameyn fikradaha.
Tags: xarunta xayeysiiskaAdWordsfunnels beddelaadraadinta ecommerceyoolalka beddelashada goolkaraadinta goolkakpisjiilka ledmugga leedhkahagaajinta suuqgeyntaraadinta lacagta lehhagaajinta raadinta lacagta lehqiyaasta waxqabadkappcxisaabaadka ppc
Feb 8, 2011 markay ahayd 1:17 PM
Maqaal weyn. "Lasoco waxa aad rabto inaad horumariso"
Waa tan tilmaam aan u isticmaalayo beeshayda maxalliga ah ee loogu yeero kala-goynta maalinlaha. waxaan badbaadinay lacag aad u badan laakiin jadwal u sameynta xayeysiiskeena inay soo muuqdaan inta lagu jiro saacadaha ganacsiga oo keliya maalintii. Waxaan u maleynayaa inay jirto warbixin (hoosta cabirka cabbirka haddii aan si sax ah u xasuusto) oo kuu oggolaaneysa inaad falanqeyso CPC iyo kharashka ku beddelashada halkii saacba maalinta ka dib si aad u xayeysiiso inta lagu jiro saacadaha ugu sarreeya. Waxaan dhab ahaantii bilownay hannaan kordhinaya dalabkeena saacadahaas ugu sarreysa si aan ugu riixno kuwa nala tartamaya mudadaas waxaanan kudhameynay yareynta qarashka guud anagoo tan sameynay sidoo kale tan iyo bartilmaameedkeedii badnaa. Runtii waxaan heystaa saaxiibkey simon inuu maareeyo akoonkeena adwords, hadii aad rabto inaad la hadasho kaliya emayl ugu dir simon.b@resultsdriven.org ama 302-401-4478. U sheeg asxaabtaada Dean Jackson.